Ity no keyboard vaovao fotsy an'ny iPad Pro 2021 | Vaovao IPhone
Tamin'ny fahatongavan'ilay maodely iPad Pro 2021 vaovao, ny orinasa Cupertino dia namoaka loko vaovao ho an'ny Magic Keyboard. Amin'ity tranga ity dia efa eo am-pelatanan'ny mpampiasa sasany ny kitendry an'ity iPad vaovao 12,9-inch ity efa manana ny horonantsary voalohany misy izahay.
Raha ny lojika dia be ny fisalasalana amin'ity keyboard fotsy ity ary afaka mieritreritra isika fa ho maloto ny tabilao na hampiseho bebe kokoa ny fiarahamonin'ny modely mainty saingy mety tsy vita izany, andao handeha mivantana hijery ny iray amin'ireo hevitra voalohany.
Toa tsy dia manana angovo firy ilay mpampiasa fa asehony anay amin'ny an-tsipiriany ny atiny an'ity kitendry Apple ity. Tokony holazaina fa Toa loko mahafinaritra be amintsika izany ary mety ho an'ny tena manokana dia vao mainka izany satria zavatra mitranga amin'ny vokatra Apple izany rehefa eo am-pelatanantsika izy ireo.
Araka ny hitantsika amin'ny horonantsary, mafy ny savily ary manandrana manokatra ny sarony amin'ny tanana iray ilay mpampiasa ary sarotra aminy ny manao izany. Ho an'ny mpampiasa unboxing an'ity keyboard ity mampatsiahy ireo MacBook taloha ary io no itovizany. Ao amin'ny horonan-tsary koa dia mampiseho Magic Keyboard taloha avy amin'ny iPad Pro hafa.
Ao amin'ny horonan-tsary dia tsy afaka jerenao ny famerenan'ny fitendry satria ny mpampiasa dia tsy manana ny iPad Pro 12,9-inch fa azo antoka fa ho toy ny maodely teo aloha izy ka noho izany dia heverinay fa tsara ny manampy ny kitendry backlit. Raha fintinina, dia toa keyboard tsara sy ao anatiny loko izay mety tianao mihoatra ny iray fa tsy sahy mividy azy fotsiny sao matahotra maloto mihoatra lavitra noho ny loko mainty.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Ity no keyboard vaovao fotsy an'ny iPad Pro 2021
Ireo fitaovana vaovaon'i Apple dia nahatratra ny magazay tamin'ny zoma
Ny anjara asan'ny HomePod sy AirPods Max amin'ny mozika Apple avo lenta